निफ्राको सेयर किन्दा ७२६, खातामा आउँदा ५०८ रुपैयाँ! :: कमल नेपाल :: Setopati
निफ्राको सेयर किन्दा ७२६, खातामा आउँदा ५०८ रुपैयाँ!
गत मंगलबार सेयर लगानीकर्ता नरेश अमात्यले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)को सेयर प्रतिकित्ता ७२६ रुपैयाँमा किने। त्यस दिन सेयर किन्न नपाइने हो कि भन्ने लागेर उनले बजार खुल्नेबित्तिकै ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिएमएस) बाट एक हजार कित्ता किन्न अर्डर हालेका थिए, तुरुन्तै कारोबार भयो।
७२६ रुपैयाँमा एक हजार कित्ता सेयर पाएका उनी निकै खुसी भए। त्यसअघिसम्म उनले अर्डर हाले पनि सेयर पाउन सकेका थिएनन्।
मंगलबार अमात्यले सेयर किनेको केही बेरमै बिक्रीमा चाप पर्‍यो। कम्पनीको मूल्य दस प्रतिशत घट्यो। मूल्य प्रतिकित्ता ५९४ रूपैयाँमा आयो।
मंगलबार किनेको सेयर आज आइतबार मात्रै उनको डिम्याट खातामा आयो। उनको डिम्याट खातामा सेयर आउँदा मूल्य प्रतिकित्ता ५०८ रूपैयाँ छ।
यस दिन पनि कम्पनीको मूल्य ६ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको हो। अमात्य लगायत सयौं लगानीकर्ताले सेयर किनेदेखि नै निफ्राको मूल्य घटिरहेको छ। कुनै पनि कम्पनीको सेयर किनेको ४–५ दिनपछि मात्रै डिम्याट खातामा आउँछ। डिम्याट खातामा सेयर नआएसम्म त्यो सेयर बिक्री गर्न पाइँदैन।
सिडिएस एन्ड क्लियरिङले 'टी प्लस टु' लागू गरेको दावी गरिरहँदा व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। यो व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा लागू हुँदो हो त मंगलबार सेयर किन्नेले शुक्रबार नै डिम्याट खातामा सेयर पाउँथे। यद्यपि शुक्रबार कारोबार बन्द हुन्छ।
यसको अर्थ सेयर किनेर डिम्याट खातामा आउँदा नै मूल्यमा भने ठूलो उथलपुथल आइसकेको हुन्छ। कम्पनीको वित्तीय स्थिति नहेरी हल्लाको पछि लाग्नेहरूलाई निफ्राले गतिलो पाठ सिकाएको छ।
(हेर्नुस् फागुन ७ गते सेतोपाटीमा प्रकाशित समाचार– कतिसम्म पुग्ला निफ्राको सेयर मूल्य, अब बेच्ने कि किन्ने?)
अर्का लगानीकर्ता पिताम्बर खरेल भन्छन्, 'कम्पनीको वित्तीय स्थिति केलाएर सम्भावित प्रतिफल तुलना गरेर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ। बढ्दा मात्तिने र घट्दा आत्तिने प्रवृत्ति तोड्नुपर्छ।'
छोटो अवधिमै कमाउँछु भन्ने आशयले सेयर बजारमा नलाग्न पनि उनी सुझाव दिन्छन्।
'मूल्य बढेछ भने अझै राम्रै भयो। तर कम्पनीको लाभांशले लगानीलाई न्याय गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो,' उनले भने।
निफ्राको मूल्य बढ्दै जान्छ भन्ने बजार हल्लाकै पछि लाग्दा अमात्यले ७२६ रूपैयाँ हालेका थिए। कम्पनीको वित्तीय स्थिति त्यति राम्रो नरहेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि उनले मूल्य अझै बढेपछि बेच्ने आशले सेयर किनेका थिए।
''मूल्य अझै बढ्छ, जतिसक्दो उठाउनुपर्छ भनेर साथीभाइ भन्ने गर्थे,' उनले भने, 'कम्पनीको वास्तविक अवस्थाभन्दा पनि मूल्य बढ्ने आशले किनेको हुँ।'
निफ्रालाई धेरै साथीहरूले पुनर्बीमा कम्पनीसँग तुलना गर्ने गरेको उनले बताए। पुनर्बीमा कम्पनीको मूल्य हाल १४२५ रूपैयाँ छ। निफ्राजस्तै पुनर्बीमाको पनि भर्नेजति सबैले न्यूनतम ४० कित्ता सेयर पाएका थिए।
तर सेयर कारोबारीले भनेजस्तो निफ्रालाई कुनै पनि तवरबाट पुनर्बीमा कम्पनीसँग तुलना गर्नै मिल्दैन। पुनर्बीमा कम्पनी अहिलेसम्मलाई आफ्नो छुट्टै व्यवसायमा एकाधिकार भएको कम्पनी हो। उस्तै प्रकृतिको अरु कम्पनी नै छैन।
तर निफ्राजस्तै प्रकृतिको कम्पनी जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी हो। त्यसैकारण दुवै कम्पनीलाई नेप्सेले हाल 'लगानी' समूहमा राखेको छ।
एकअर्कालाई तुलना गरेर मात्रै कारोबारका लागि निर्णय गर्नुपर्नेमा हल्लाकै भरमा दोस्रो बजारबाट निफ्राको सेयर किन्ने उनीजस्तै धेरै लगानीकर्ता अहिले चिन्तित छन्। सेयर बजारबारे विभिन्न फेसबुक पेज बनाएर कारोबारीले अनेक हल्ला चलाइरहेका हुन्छन्। जुन हल्लाका पछि लाग्दा कतिपय साना लगानीकर्ता समेत मारमा परेका छन्।
अर्कोतर्फ खरिद गरेको पाँच दिनमा मात्रै सेयर डिम्याट खातामा आउने 'सुस्त' नीतिलाई पनि केही प्रभावकारी बनाउनेतर्फ नियामक लाग्नुपर्ने देखिन्छ। एक दिनभित्रै सेयर किन्ने/बेच्ने र त्यसको उतारचढावबाट फाइदा लिन चाहनेलाई छुट्टै व्यवस्था गर्नेबारे नेप्सेले अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले जानकारी दिए।
एक दिनभित्रै सस्तो मूल्यमा सेयर किन्ने र महँगोमा बिक्री गर्ने अथवा महँगोमा बिक्री गरेपश्चात सस्तोमा खरिद गरेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने उद्देश्य लिएकालाई यस्तो व्यवस्थाले फाइदा हुनेछ।
त्यतिमात्रै होइन, आफूसँग हुँदै नभएको सेयर पनि सापटी लिएर बेच्न पाइने र पछि सापटीका रूपमा सेयर नै तिर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेरनसकिनेबारे समेत अहिले अध्ययन भइरहेको छ।
'अहिले हामीले यसबारे विभिन्न देशहरूको स्थिति बुझेर अध्ययन गरिरहेका छौं,' पराजुलीले भने।
यो पनि हेर्नुस् -
सेयर पनि अरूसँग सापटी लिएर बेच्न पाइएला त?
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १६, २०७७, ०५:५७:००
करिब १२ अंकले घट्यो नेप्से, सबैभन्दा धेरै एसियन लाइफको कारोबार
नबिल एसइईका २० जनालाई 'इनेब्लर अफ सोसल अन्टरप्रेनरशीप' अवार्ड
कति पुग्यो दिनार र रियालको भाउ? यस्तो छ आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर
कैलाली लम्कीचुहामा हिमालयन बैंकको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
दोहोरो अंकले नेप्से घट्दा कारोबारमा देखियो असर